Brezila : Fampanantenana Poakaty Nahatezitra ny Amazoniana Manamorona ny Rio Madeira · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2013 4:52 GMT
Ity tantaran'i Ana Aranha nitondra lohateny tamin'ny voalohany hoe Vidas em Trânsito na “Fiainana Mandalo“, izay miresaka momba ny fiantraikan'ny tetikasam-panorenana goavana manamorona ny reniranon'i Madeira ao amin'ny fanjakan'i Rondônia, Brezila, ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra manokan'ny ny Ivotoeram-panaovan-gazety famotorana Breziliana #AmazôniaPública. Havoakan'ny Global Voices ao anatin'ny lahatsoratra dimy izany.
Fony nanaisotra ny mponina tamin'ny trano manamorona ny reniranon'i Madeira mba hanafòrana azy ho ao anatin'ny tetikasam-pananganana tohodrano hamokarana herinaratra ny orinasa Energia Sustentável (Angovo mateza), dia nampanantena ireo mponina nafindra toerana fa hanome toerana vaovao honenana.
Nanangana ny tanàna vaovaon'ny Mutum Paraná honenan'ny injeniera sy ny olona miandraikitra ny orinasam-pamokarana herinaratra Jirau ny orinasa, fa mandray ihany ko ny mponina teo aloha tao an-tanànan'i Mutum taloha.
Saingy maro ny manameloka ny orinasa ho tsy nitana ny teny nomeny. Maro ny fanontanian'i Sônia Cabral Costa, mponina taloha tao velha Mutum, izay manana trano fivarotana akanjo amin'izao fotoana izao :
Eles prometeram que aqui ia ter faculdade, indústrias, milhares de empregos. Cadê? Nada disso foi cumprido. Essas pessoas tinham sua fonte de renda, vieram acreditando no que a empresa prometeu
Nampanantena ry zareo fa hisy oniversite, orinasa maro ary asa an'arivony ao. Aiza ry zareo? Tsy nisy hita ireo fampanantenana ireo. Nanana fidiram-bola ireo olona ireo, nandeha tany ny olona noho ny fitokisany amin'izay nampanantenain'ny orinasany.
Ny tombatombana voalohany nataon'ny orinasa mpamokatra angovo [ao amin'ny reniranon'ny Madeira] tamin'ny voalohany dia olona 2849 no afindra toerana, 1762 ny any amin'ny faritra hotondrahan-dranon'i Jarau ary 1762 avy amin'ny tohodranon'i Santo Antônio [avy amin'ny orinasa Santo Antônio Energia]. Araka ny filazan'ny Movimento do Atingidos por Barragens (Hetsik'ireo Niharan'ny Tohodrano), fa 4325 no nafindra toerana na niharany ankolaka noho ny fananganana tohodrano amin'izao fotoana izao.
Nahavita ny fianarany tamin'ny sekoly ambaratonga fototra ny zanaky ny mpianadahy amin'i Sônia tamin'ity taona ity. Amin'ny herintaona dia voatery hanavatsava 30 km isan'andro izy hianarana any Jaci Paraná. Nisy tao amin'ny fampanantenan'ny orinasa ny fananganana sekoly roa ao an-tanàna, ny iray fanabeazana fototra ary ny iray kolejy. Vita tokoa ireo sekoly roa ireo, saingy an'ny tsy miankina amin'izao fotoana izao ny iray amin'ireo sekoly ireo.
Misy sora-baventy mihantona eo amin'ny sekoly Einstein ahitana ny fangon'ny orinasa mampahatsiahy fa naorina avy amin'ny volan'ny Bakim-Pampandrosoana Breziliana (BNDES) no nananganana ny trano. Saingy ireo izay mahaloa 240 Reais (121 dolara amerikana) isam-bolana ihany no tafiditra ao an-tsekoly, na 200 Reais (100 dolara) ho an'ny zanaky ny “Camargueiro”, anarana omen'ny mponina ireo mpiasan'ny orinasa Camargo Corrêa manangana ilay foibe mpamokatra angovon'aratra.
Raha manana mpianatra 20 isan-kilasy ny ao amin'ny kolejy tsy miankina, ahitana mihoatra ny 40 isan-kilasy kosa ny ao amin'ny sekolim-panjakana ary mbola miasa aza ny alina ho fanomezana fahafaham-po ny tinady , hoy ny lefitry ny talen'ny sekolim-panjakana hoe:
Tamin'ny herintaona, mpianatra 230 no nolavina satria tsy ampy ny efitra. Nandodòna teo ambaravarana ny ray aman-dreny hiangavy fatratra saingy tsy misy toerana azo ametrahana azy intsony.
Sekoly natsangana ho an'ny fokonolona manodidina saingy nafindra ho an'ny tsy miankina saripika:Marcelo Min
“Tokony ho an'ny vondro-paritra izy io saingy nilaina ny sekoly ho an'ny zanaky ny injeniera, ka dia nifanaraka tamin'ny tsy miankina ny Jirau. Tsy hitako izay olana ” hoy i Pedro Bébert, mpiandraikitra ny fandraharahana ny fanonerana ara-tsosialin'ny fiadidiana ny tanàna.
Se eles estão pagando os professores, [o município] não tem interesse em assumir essa escola “
Raha ry zareo no mandoa ny volan'ny mpampianatra, tsy hanintona [ny tanàna] ny fitantanana ny sekoly.
Efa fahita any amin'ny tanàna kely hafa naorin'ny Jirau sy ny Santo Antônio hampiatranoana ireo mponina tsy maintsy nafindra toerana ny olana ara-poto-drafitr'asa. Ny tena hita matetika dia ny fahalonaky ny tany izay miantraika amin'ny fahavokarana. Nafindra toerana avy eny amoron-drano, toerana mahavokatra ara-boajanahary rehefa miakatra ny rano, ary afindra amin'ny toerana novidian'ny mpamboly, izay matetika toerana natao hiompiana omby.
Fitarainana hafa fandre ihany koa ny fofon-tatatra re ao an-tranondry zareo. Manakaiky ny faritra voatondrky ny tohodrano ny fanorenana vaovao. Noho ny fitondraky ny rano dia misondrotra ny fotaka miteraka fahavakisana amin'ny tatatra sy ny fanarian-drano.
Nanetsika ekipa mpanao gazety telo avy amin'ny Agência Pública de Reportagem e Jornalismo ny tetikasa Amazônia Pública izay niasa tamin'ny faritra amazoniana telo tanelanelan'ny jolay sy oktobra 2012. Ny tanjon'ireo fanangonam-baovao dia ny hahafantarana ny hasarotry ny fanaovana tetikasa goavana any amin'ny faritra amazoniana, ka tafiditra ao ny fifampiraharahana maro mbamin'ny marimaritra iraisana eo amin'ny mpandray anjara maro ( governemanta, orinasa, fiarahamonim-pirenena), ary hanadihadiana fizotry ny toe-draharaha. Ny lalana ankapobeny arahin'ny fanangonam-baovao dia ny ijerena ny tombontsoan'ny besinimaro.
Soratra miverina: Brezila : Nesorin’ny Toby Famokarana Herinaratra Saingy Niverina Eny Amoron-Drano ny Mponina · Global Voices teny Malagasy
[…] Lahatsoratra teo aloha: Brezila : Nampangain'Ireo Mponina Nafindra Toerana Ho Nanao Fampanantenana Poakaty Ny Toby Brezi… […]
28 Mey 2013, 15:54
Soratra miverina: Amazona Breziliana : Mitolona Haharaka Ny Onjan’ny Fitombon’ny Mponina Ao Amin’ny Toby Famokarana Herinaratra · Global Voices teny Malagasy
[…] Lahatsoratra voalohany: Brezila :Fampanantenana Poakaty Nahatezitra ny Amazoniana Manamorona ny Rio Madeira Ny lahatsoratra manaraka: Bresila : Nesorin'ny Toby Famokarana Herinaratra Fa Niverina Eny […]
02 Jona 2013, 14:17